Pituitary Luteinizing Ókè mmiri ọgwụ maka Ọgwụ (LH) - China Ningbo Second Ókè mmiri ọgwụ
Pituitarii Lutropinum Pro Injectione (LH) [Description] Ngwaahịa a bụ na-acha ọcha ma ọ bụ gbanyụọ-ọcha ifriizi-Fikiere nkanka ma ọ bụ ntụ ntụ. [Function na ojiji] Ókè mmiri ọgwụ ọgwụ. Site ná nkwado nke pituitary follicle-akpali akpali hormone, ọ nwere ike na-akwalite ikpeazụ maturation nke follicles, eji na ovulation nke ndị tozuru okè follicles na eji ọgbọ nke corpus luteum. Ọ na-bụ-eji: 1. Eme follicles tozuru okè na ovulate; 2. Eme ọgbọ nke ọtọ corpus leteum; 3. Cure ovulation ...
Ngwaahịa a bụ na-acha ọcha ma ọ bụ gbanyụọ-ọcha ifriizi-Fikiere nkanka ma ọ bụ ntụ ntụ.
Mmiri ọgwụ ọgwụ. Site ná nkwado nke pituitary follicle-akpali akpali hormone, ọ nwere ike na-akwalite ikpeazụ maturation nke follicles, eji na ovulation nke ndị tozuru okè follicles na eji ọgbọ nke corpus luteum.
Ọ na-bụ-eji: 1. Eme follicles tozuru okè na ovulate;
2. Eme ọgbọ nke ọtọ corpus leteum;
3. Cure ovulation ọdịda (ogbenye okè nke follicles; egbu oge ovulation);
4. Cure n'oge ọnwụ ma ọ bụ na-ete ime nke embrayo mere site hypoplasia nke corpus luteum;
5. Cure mkpụmkpụ oestrum megharịa breeder nke nne ụmụ anụmanụ;
6. Cure follicle ahu otutu;
7. Cure nwoke ụmụ anụmanụ na ala mmekọahụ mbanye, ala semen olu na-erughị spam.
I. A pplication of C attle amụba
1. Ọgwụgwọ nke anyịnya ovarian ọrụ: intramuscular ntụtụ 200IU nke FSH plus 100IU nke LH; na dosing ga-ugboro ugboro ugboro ma ọ bụrụ na ọ bụ adighi ike.
2. itinye n'ọkwa nke ovulation: intramuscular ntụtụ 200-300IU nke LH n'oge mating ma ọ bụ ọtụtụ awa tupu mating nwere ike kwalite ovulation ma melite ime ọnụego.
3. Ngakọrịta nke ovulation: intramuscular ntụtụ 200IU nke LH n'oge estrus nke nne ehi mgbe a na-emeso na estrus mmekọrịta nwere ike n'ihu na-akwalite mmekọrịta nke ovulation ma melite ime ọnụego mgbe estrus mmekọrịta.
4. Super ovulation: intramuscular ntụtụ 200IU nke LH 72 awa mgbe super ovulation ọgwụgwọ nwere ike kwalite maturation na ovulation nke follicles ma welie mmetụta nke super ovulation.
5. Igbochi miscarriages: intramuscular ntụtụ 200IU nke LH ọtụtụ ụbọchị mgbe wuru insemination; na-aga n'ihu ochichi maka 2-3 consecutive ụbọchị.
II. ndị ọzọ na-
1. Eme super ovulation mmetụta ewes: intramuscular ntụtụ 100-200IU nke LH 72 awa mgbe super ovulation ọgwụgwọ nwere ike kwalite maturation na ovulation nke follicles na-eme ka ovulation synchronized.
2. Intramuscular ntụtụ 50-100IU nke LH maka ewes n'oge ma ọ bụ mgbe mating maka 2-3 consecutive ụbọchị nwere ike isi gwọọ n'oge ọnwụ ma ọ bụ riri ite ime nke embrayo mere site hypoplasia nke corpus luteum.
3. Cure nwoke ụmụ anụmanụ na ala mmekọahụ mbanye, ogbenye semen quality, cryptorchidism, na enweghi ike, wdg
Ngwaahịa a n'ozuzu na-adịghị njikere n'ime ngwọta maka nchekwa bụrụ na nke deactivation.
The dose ga-okpukpu abụọ maka ọgwụgwọ nke ovarian ahu otutu.
[Okwu nke Ndaba] afọ 2
[Ndọrọ ego Oge] No ndokwa
Previous: Pituitary Follicle ume Ókè mmiri ọgwụ maka Ọgwụ (FSH)
Osote: Posterior Pituitary Ọgwụ
Adrenaline Hydrochloride Ọgwụ
Oxytocin Ọgwụ (Pitocin)